Umaki: ithrafikhi | Martech Zone
Izindlela ezi-3 zangempela zesikhathi sokuqukethwe okwandisa ukuzibandakanya
NgoLwesine, Agasti 11, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Lapho abantu becabanga ngokwenziwa kokuqukethwe, bacabanga ngemininingwane yomuntu efakwe kokuqukethwe komlayezo we-imeyili. Akukona nje ukuthi ungubani umuntu olindayo noma ikhasimende lakho, futhi kumayelana nokuthi bakuphi. Ukwenza okwasendaweni kuyithuba elikhulu lokushayela ukuthengisa. Eqinisweni, ama-50% wabathengi abasesha endaweni kwi-smartphone yabo bavakashela isitolo kungakapheli usuku, i-18% iholele ekuthengeni Ngokuya nge-infographic kaMicrosoft neVMob,
Izikhiye eziyi-7 Zokuthengisa Nokukhangisa Kwamabhizinisi Amancane
NgoLwesithathu, Septemba 17, 2014 NgoLwesibili, Septhemba 16, 2014 Douglas Karr
Ngenkathi sisiza amabhizinisi amakhulu ngemizamo yawo yokuthengisa nokumaketha, siyibhizinisi elincane uqobo lwethu. Lokho kusho ukuthi sinemithombo elinganiselwe futhi njengoba amaklayenti eshiya, kubalulekile ukuthi sibe namanye amaklayenti athatha indawo yawo. Lokhu kusenza sikwazi ukulawula ukugeleza kwemali futhi sigcine izibani zikhanya! Isimo esinzima, noma kunjalo. Imvamisa sinenyanga eyodwa noma ezimbili kuphela ukulungiselela ukuhamba kweklayenti elilodwa nokugibela kwe-
Ukwamukelwa kokumaketha kokuqukethwe, amaqhinga nemiphumela ngo-2014
NgoLwesithathu, Agasti 13, 2014 NgoLwesibili, Agasti 12, 2014 Douglas Karr
Sishicilele Isimo Sokumaketha Okuqukethwe okuvela kwa-Eloqua, Isimo Samanje Sokukhangiswa Kokuqukethwe Kwangonyaka ka-2014, kanye Namathrendi Wokumaketha Okuqukethwe ka-2014… usuqala ukubona ingqikithi kulo nyaka? Le infographic evela ku-Uberflip ikhombisa isimo samanje sokumaketha kokuqukethwe phakathi kwamabhizinisi we-B2B ne-B2C. Yimaphi amaqhinga abakhangisi abawathandayo njengamanje? Ngabe bayayibona imiphumela abayilindele? Ikusasa libukeka kanjani? Kuhlole! Le infographic ithatha kancane
Amaqiniso ayi-10 Azokumangaza Nge-Social Media
NgoLwesibili, Agasti 5, 2014 NgoMgqibelo, Agasti 9, 2014 Douglas Karr
Isici esisodwa sewebhu yezenhlalo engiyithandayo yinkambu yokudlala elinganayo enikeza izinkampani ezincane nezinkulu, kanye neqiniso lokuthi kuseyiWild West. Inqobo nje uma sigcina abalawuli nezandla zikahulumeni besuka kuyo, ngineqiniso lokuthi lizoqhubeka nokuchuma. Lokho kusho, ngihlala ngicasukile lapho ngibona okuthunyelwe kwebhulogi, i-infographic, noma i-webinar mayelana nomthetho othile wezokuxhumana. Lapho
I-Content Marketing Conundrum
ULwesihlanu, May 16, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Noma ngabe ungaphesheya kwechibi noma lapha eMelika, angikholwa ukuthi izinselelo ngokukhangiswa kokuqukethwe azinandaba… ukuthuthukisa isu elilinganisiwe elithuthukisa okuqukethwe okuphoqelela okuhambisana nezethameli zakho kuma-mediums nakumazinga ezinhloso kunzima. Ayikho imfihlo, kungumsebenzi onzima nje. Njengoba abaningi bethu bebengalindela ukuthi okutholakele kwabo kuveze ukuthi izabelomali zokuqukethwe bekufanele zikhuphuke ngonyaka we-2014. Kepha ngenkathi utshalomali lukhula, abathengisi abaningi namanje